युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? हेर्नुहोस्… – Sanjal Nepal
Homeसमाचारयुवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? हेर्नुहोस्…
युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? हेर्नुहोस्…
November 19, 2020 admin समाचार 18157
एजेन्सी – युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? भनेर गरिएको एक सर्बेक्षण मा युवतीहरुको जबाफ सुनेर सब चकित पर्ने एक तथ्य सार्बजनिक भएको छ। धेरै युवती हरुले सर्बप्रथम पुरुषको प्रसनालिटिमा आखा जाने बताएका छन्। उनीहरुले पुरुष संग भएको भौ’तिक सु’ख वा आवरणमा देखिएको कुनै पनि बस्तु संग आ’कर्षक हुदैनन्। महिला हरुले कुनै पनि पुरुष संग नजिक हुनु भन्दा पहिले पुरुषका अनिबानि चाल चलन र उसको बिचारमा महिला ध्यान जाने गर्दछ। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
सुनसान जंगलमा चेनमा ताल्चा लगाएर आफैले आफुलाई रुखमा बाँधे, दुई वर्षपछि भेटियो कंकाल
आखिर के थियो यस्मा जो यो एक जोर जुत्ता चार करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा बिक्री भयो
January 17, 2021 admin समाचार 781
एक जोर जुत्ता चार करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा बिक्री हुनकाे कारण थाहापाउदा दुनियाँ नै चकित(हेर्नुहाेस्) । नाइकीको सह-संस्थापकले डिजाइन गरेको एक जोर ऐतिहासिक जुत्ता चार करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको
फे’रि भा’इरल भयो यी चे’लि’को नयाँ काण्ड …..(हेर्नुहोस भिडियो)
January 11, 2021 admin समाचार 2655
शान्तिनगरमा बसोबास गर्दै आएका देवरानी सम्झना (नाम परिवर्तन) र जेठानी एन्जिला (नाम परिवर्तन) को सम्बन्ध राम्रै थियो। परिवार भित्र कसले कसलाई आदर गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु बीच म’नमु’टाव सुरु भयो। उनीहरु स’म्बन्ध राम्रो रहँदा एकले
कक्षा १२ को परीक्षा : मोबाइल हेर्दै चिट चोरेको भिडियो भाइरल, परीक्षा रद्द हुन सक्ने ! (भिडियो)
November 26, 2020 admin समाचार 1684
जारी कक्षा १२ को परीक्षा दिने क्रममा अनियमितता भएको भिडियो भाइरल भएको छ । परीक्षा हलमा खिचिएको २६ सेकेन्डको सो भिडियोमा विद्यार्थीहरु मोबाइलको स्क्रीन हेर्दै उत्तर लेखिरहेका देखिएका छन् । परीक्षा हलमा निरीक्षक भने देखिँदैनन्
LEX 18 agenda conversation: Job club (445114)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418680)
Hello world! (345999)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318792)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115328)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (105658)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (99975)